Warshadaha Warshadaha Shiinaha iyo Warshadaha | Jrain
Nadiifiyayaasha Fiberglass waxay caan ku yihiin keydinta dareeraha, daaweynta biyaha, nidaamka FGD, maareynta kiimikada iyo xakamaynta wasakheynta, habraaca nadiifinta gaaska, xakameynta qulqulaya gaasaska, gaar ahaan gaasas wasakhaysan, gubashada qashinka iyo geedi socodka koronto dhalinta. Sababta oo ah:
Marka la barbar dhigo badeecadaha birta ka samaysan ee bir ama bir ka samaysan, Fiberglass caag ah oo la xoojiyay (FRP) ayaa leh faa iidooyin badan.
FRP waa mid aad u culus-oo miisaan culus, aad u xoog badan waxaana lagu soo saari karaa dheeman ballaaran, oo saameyn toos ah ku leh marka la dheereeyo dhererka rakibaadda iyo kaydinta kharashka.
Gudaha ee qalabka xoqida fiiberlass waa mid siman, oo bixiya astaamo qulqul aad u fiican oo si fudud loo nadiifin karo.
Qeybaha nidaamka dheeriga ah oo ay ka mid yihiin tuubooyinka gudaha iyo bannaanka, bangiyada buufinka, guluubka taageerada, miirayaasha shabaqa, xirxirayaasha, nidaamyada qaybinta iyo tuubbooyinka ayaa laga been abuuri karaa qaab kasta ama qaabeyn kasta.
Qalabka dibadda sida Jaranjarada, burooyinka, xarkaha, socodka, tuubbada, dareeraha elektarooniga ayaa sidoo kale ah xadka sahayda ee Jrain.
Jrain waxay falanqeeysaa mashruuc kasta oo cusub waxayna dib u eegtaa sharraxaadda waxqabadka nidaamka si loo xusho agabyada saxda ah iyo qaababka dhismaha, ugu dambeyntiina waxay naqshadeysaa oo been abuurtaa guluubyada xoqidda ee ku saleysan shuruudaha ku saabsan dhexdhexaad, heerkulka, heerka socodka, cadaadiska, dhulgariirka, culeyska dabeysha iyo xaaladaha cimilada .
Markii loo baahdo, dhalada ECR galaaska waxaa loo isticmaalaa marka lagu daro fiber-E-galaas si loo abuuro iska caabin kiimikaad sarreysa, iyo jaakad midab leh ama midab leh oo muuqaal ah ayaa loo istcimaalaa iftiinka UV waxayna bixisaa difaac.
Iyada oo ah adeeg bixiye buuxa, Jrain ayaa naqshadeysa, soosaarisa isla markaana ku rakibaysa qalab loogu talagalay bannaanka qashin-qubka sida jaranjarada, aagyada, qashin-qubka, lakabka ilaalinta iyo dheecaanka elektiroonigga ah laakiin sidoo kale waxay leedahay xarunta inay kugu adeegto iyada oo la gaarsiinayo dhammaan bannaanka sida bangiyada buufin, taageerada alwaaxyada, birta miirayaasha iyo xirmooyinka.
Hore: Kala caddeynta & dejinta
Xiga: Taangiyada Dhul Weyn Oo Weyn
Fiberlass-ka Farsamaysan, Mashiinka Dabaysha Fiberglass, Mashiinka Dabaysha ee GRP, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Dhoolatus gacmeed, Caaryada,